ओली- देउवा र राणाको बदमासी - Muldhar Post
ओली- देउवा र राणाको बदमासी
पत्रपत्रिका खबर २०७७, ५ फाल्गुन बुधबार 111 पटक हेरिएको
संसद विघटनसँगै अर्को ठूलो असंवैधानिक काम भएको थियो— संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस। मुलुक संसद विघटनमा केन्द्रित हुँदा संवैधानिक परिषदले गरेको त्यो अवैधानिक काम भने ओझेलमा परेको छ।
संवैधानिक परिषद किन गठन भएको हो? त्यसमा बस्ने मानिसहरूबीच पदको भागबन्डा र बाँडफाट गर्न हो? कदाचित होइन।
तर भयो के? संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेका मान्छे नियुक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छाचारिता रोक्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको जिम्मेवारी थियो। त्यो जिम्मेवारी देउवाले निर्वाह गरेनन्। बरू प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क भाग मिलाए। एकातिर ‘मैले कसैलाई सिफारिस गरेको छैन’ भन्ने देउवाको निर्लज्ज दावी जारी छ। अर्कातिर उनका खल्तीका मान्छे संवैधानिक अंगका कुर्सीमा बिराजमान भइसकेका छन्।
हाम्रो न्यायिक आस्थाको सर्वोच्च निकाय, संविधानको व्याख्या र रक्षासमेत गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले त यो स्वैच्छाचारिताको साक्षी बस्न नमान्नुपर्ने!तर साक्षीको के कुरा, प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफ्नो भाग नै खोजे। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा बकाइदा आफ्ना पनि ‘सेयर’ स्थापित गरे र आफ्ना मानिस नियुक्त गराए।
के सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाको जिम्मेवारी त्यही हो? के संविधानले उनीबाट गरेको अपेक्षा त्यही हो? मुलुकलाई उनले दिने न्याय त्यही हो? संवैधानिक परिषदले यति हतार र गुपचुपमा नाम सिफारिस गर्‍यो, उसले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त हुनेको योग्यता पुगेको छ, छैन भन्ने पनि हेरेन।
नेताहरूले निजी स्वार्थ र मिलिजुलीका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा गलत मानिसहरू लगेको यो पहिलोपटक होइन। त्यस्तै मिलिभगतका उत्पादन थिए— लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक। संविधानको मर्मविपरीत यो मिलिभगत नगरौं, यस्तो भागबन्डा नगरौं, क्षमता र इमान भएका अनि योग्यता पुगेका राम्रा मानिस नियुक्त गरौं भनेर प्रबुद्ध नागरिकहरूले भनेको पनि यो पहिलोपटक होइन। मिडियाले लेखेको पनि पहिलोपटक होइन।
यति आधारभूत कुरा मान्न पनि नेताहरू तयार छैनन्। नेताहरूलाई यति कुरा मनाउन आममानिसले के गर्नुपर्ने? प्रबुद्ध नागरिकले के भन्नुपर्ने? मिडियाले के लेख्नुपर्ने? कि हामी सबै सेरिनुपर्ने? सडकमा लतारिनुपर्ने? कि नेतालाई सडकमा लतार्नुपर्ने? मानिसहरू आजित हुनुभन्दा पहिले, आममानिसले विरक्तिएर ‘चाहिएन लोकतन्त्र’ भन्नुभन्दा पहिले, लोकतन्त्रको धिपधिपे बत्ती कसैले झ्याप्प निभाउनुभन्दा पहिले नेताहरू सुध्रिने कि नसुध्रिने?
संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने के थियो? यो मुलुक सबै नागरिकको हो। क्षमता, इमान भएका र योग्यता पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकको संवैधानिक अंगहरूमा काम गर्न पाउने ‘वैधानिक हक’ हुन्छ। राजनीतिक पहुँच नभएका आधारमा वा नेताका ढोका नचहारेबापत उनीहरूलाई त्यो हकबाट वञ्चित गर्न पाइन्न।
संवैधानिक परिषदले काबिल नागरिकमध्येबाट छानेर संवैधानिक अंगहरूमा पुर्‍याउन उचित विधि बनाउनुपर्थ्यो। ती अंगहरूमा नियुक्तिका लागि ‘रोष्टर’ बनाउनुपर्थ्यो। त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्थ्यो। सम्भावित उम्मेदवारको क्षमता, चरित्र र विगतबारे खोजीनीति गर्नुपर्थ्यो। रोष्टरमा नपरेका तर योग्य र इच्छुक नागरिकले पनि चाहेमा मौका पाउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। इमान, क्षमता र स्वतन्त्र हैसियत भएका व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगहरूमा पुग्न सक्ने बाटो खुल्ला राख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
नेताजीहरू, तपाईंहरूले किन यस्तो प्रबन्ध कहिल्यै चाहनुभएन भन्ने सबैलाई प्रस्ट थाहा छ। तपाईंहरूले कस्ता मानिसलाई विभिन्न अवसर दिइरहनुभएको छ भन्ने पनि थाहा छ। जो तपाईंको नजिक छ, जो तपाईंप्रति अनुग्रहित छ, जसले तपाईंलाई हिजो आर्थिक लाभ दिलाएको थियो, जसले भोलि तपाईंको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सहयोग गर्छ, केही अपवादबाहेक तपाईंहरूले त्यस्तै मानिसलाई मात्र नियुक्त गर्नुभएको छ।
आममानिसले। मैले अहिले चढिरहेको गाडी बैंकबाट कर्जा लिएर किनेको हो। त्यो गाडी किन्दा मैले राज्यलाई २४० प्रतिशत कर तिरेको छु। अर्थात्, मैले एउटा गाडी किन्दा राज्यलाई त्यस्तै साढे दुइटा गाडी किन्न पुग्ने पैसा तिरेको छु। सम्भवत: संसारमा अर्को कुनै मुलुक छैन, जहाँ नागरिकले गाडी चढेबापत यति चर्को मूल्य चुकाउनुपरोस्!
नेताजीहरू, तपाईंहरूलाई थाहा छ नेपालीमाथि करको भार कति धेरै छ? उनीहरूले कति धेरै कर तिर्छन्? दक्षिण एसियामै मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा सबभन्दा धेरै कर नेपालीले तिर्छन्। गत वर्ष नेपालीले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको २४ प्रतिशत कर तिरेका थिए। जबकि यो भारतमा ९.८८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ९.६, बंगलादेशमा ९.३, श्रीलंकामा १२.२ र भुटानमा १२.३ प्रतिशत छ।
सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार बहुआयामिक छ। यो हटाउन त्यति सजिलो छैन। तर हरेक नेपालीलाई यो पनि थाहा छ— जुन नेताले संविधान र कानुन मान्दैन, जसले संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगहरूमा इमान, क्षमता र स्वतन्त्र सोच भएका मानिस लैजान मान्दैन, जसले आफ्नै इर्दगिर्द घुम्ने मानिसलाई मात्र अवसर दिन्छ, जसले आफू नजिकका मानिस भ्रष्टाचारमा मुछिनेबित्तिकै तीन बित्ता उफ्रिएर उसको बचाउ गर्छ, त्यो नेताले उसको जुनीभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने छैन।
यो भ्रष्टाचारको जालो फाल्न अहिलेको राजनीति र त्यसको नेतृत्व सर्वथा अक्षम छ भन्ने बारम्बार देखिएको छ। भनिन्छ, जुन चेतले समस्याको दलदलमा पुर्‍याउँछ, त्यही चेतले त्यो समस्याबाट पार लगाउन असम्भव हुन्छ। यसपालि संवैधानिक परिषदमा भएको जालसाजीले त्यही संकेत गर्छ। अमित ढकालले लेखेको यो लेख सेतोपाटीबाट साभार गरिएको हो ।